Madaxweynaha Doorashada sannadkan dhacaysa waxay cashar shacabku ka baranayaan dimoqraadiyadda”. – Gedo Times
Madaxweynaha Doorashada sannadkan dhacaysa waxay cashar shacabku ka baranayaan dimoqraadiyadda”.
Madaxweynaha dowladda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Soomaaliya 47 kadib ay dhacayso doorasho, tallaabadaasina ay dhiirigelineyso dib u soo kabashada siyaasadeed ee dalka.
Madaxweynaha waxaa uu intaa ku darey in hawlaha ugu muhiimsan ee hadda horyaalla dowladdu ay yihiin hirgelinta iyo dhameystirka nidaamka federaalka, in dalka la gaarsiiyo dimoqraadiyad dhameystiran iyo dib u eegis lagu sameynayo dastuurka dalka, bisha soo socotana shirweyne arrimaha dastuurka la xiriira uu ka furmi doono magaalada Garowe.
DAAWO VIDEO: Madaxweynaha Jubbaland oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Alshabaabka Bu’aale